से तो पा नी ब ग्ने समस्याले ग्रसित हुनुहुन्छ ? यसरी गर्न सकिन्छ घरमै उपचार – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /स्वास्थ्य/जिबनशैली/से तो पा नी ब ग्ने समस्याले ग्रसित हुनुहुन्छ ? यसरी गर्न सकिन्छ घरमै उपचार
तुलनात्मक रूपमा पुरुषभन्दा महिलामा स्वास्थ्य समस्या धेरै हुन्छन्। विशेषगरी पाठेघर क्यान्सर तथा ट्युमर, विभिन्न यौन रोग र स्तन क्यान्सर गम्भीर समस्या हुन्। पछिल्लो समय धेरै नेपाली महिलामा सेतो पानी बग्ने समस्या देखिने गरेको छ।
यो समस्याका धेरै कारण छन्। महिलाहरुको योनीबाट सेतो, पहेंलो, हरियो, रगत मिसिएको आदि इत्यादि प्रकारको चिप्लो पदार्थ बग्ने समस्या हुन्छ।यो सामान्य पनि हुनसक्छ वा प्रजनन अङ्गमा कुनै किसिमको संक्रमणको संकेत हुन सक्छ ।
यो पानी जस्तो पदार्थ सन्तान उत्पादन गर्ने अङ्गहरु ओभरी, फलोपिवन ट्युव, भेजिना तथा क्यरभिक्सबाट पनि हुनसक्छ। सामान्य किसिमबाट बग्ने पदार्थ गन्ध नआउने पातलो हुन्छ । गर्भवति भएको बेलामा बग्ने सेतो पानी सामान्य हुन्छ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
पूरा जानकारी भिडियोमा हेर्नुहोस्